SIDEE BUU WAXTAR U LEEYAHAY: ISTICMAALKA DAAWADA DHAQANKA IYO KA HORTAGGA - BOW
Basasha lakabka - geedo daaqsinka ah oo ka mid ah qoyska basasha. Dhirta dhuleed - Koonfurta Aasiya.
Mid ka mid ah dalagyada khudradda ugu caansan. Waxaa loo adeegsadaa karinta, daawada, kiknoolajiyada.
Ma taqaanaa? Masaaridii qadiimiga ahaa waxay ugu yeedheen basasha "geedka ilaahyada" waxayna ku qanacsan yihiin in adduunka oo dhan la dhisay ka dib markii tusaale ahaan basal badan oo badan.
Waxyaalaha xasaasiga ah iyo qaabka kiimikada ee basasha
Basasha waxay ka kooban tahay 8 ilaa 14% of fructose, maltose, sucrose, 2% borotiinka. Nalalka ayaa hodan ku ah fitamiinada kooxda B, E, ascorbic acid; ee ka kooban qayb ka mid ah ququetin flavonoid, saponins, fosfooraska, birta, iyo saliida lagama maarmaanka ah, joogitaanka taas oo keenaysa caraf udgoon iyo dhadhanka basbaaska. Iodine, malic iyo acids, pectins iyo glycosides waxaa laga helaa caleemo cagaaran.
Basasha waxay leeyihiin kaloori halkii 100 g - 41 kcal; 100 g waxaa ku jira 1.4 g oo ah borotiinka, 10.4 g oo ah carbohydrates.
Waa muhiim! Heerka sonkorta ee basasha ayaa ka sarreeya tufaaxa iyo isteroberi, laakiin, inkastoo tani, basasha ayaa ah mid aad u fiican.
Qodobbada waxtarka leh ee basasha
Faa'iidada basasha ee jirka ayaa lagu muujiyay xaqiiqda ah in phytoncides oo la yiraahdo basasha ay gacan ka geystaan ​​burburinta bakteeriyadaha cudurada iyo ciliates, iyo phytoncides oo kacsan ayaa dila dhuftarta iyo ulaha qaaxada. Basasha ayaa kicin kara rabitaanka cuntada, kaadida, bakteeriyada iyo antiseptic, waxay kordhisaa dheecaanka dheefshiidka dheefshiidka.
Faa'iidooyinka iyo dhibaatada basasha ee haweenka waxay ku jirtaa kartida ay ku caawin karto daahinta iyo maqnaanshaha caadada, daaweynta algomanorrhea, laakiin isla mar ahaantaana haweenka uurka leh waa la mamnuucay inay isticmaalaan si aysan u dhicin dhicin ama dhiigbax qatar ah.
Faa'iidooyinka basasha ee ragga waxay ka muuqataa awoodda khudaarta si loo daaweeyo caabuqa qanjirka 'prostate', si loo abuuro jinsi ahaan. Intaa waxaa dheer, basasha, sida takhaatiirta ay aamminsan yihiin, waa isugeyn ku habboon oo ka caawiya jet laguna xiro. Casiirka basasha ayaa yaraynaya xajin.
Waa muhiim! Basasha waxaa ku jira flavonols oo ka hortagga kansarka.
Isticmaal daawada dhaqameed: daaweynta basasha
Basasha ayaa aad loogu caansan yahay daawada dhaqameed. Basasha waxay daaweysaa cuduro badan: hargabka, boronkiitada, hypertension, xanuunada habdhiska urojiinta, murgacashada xirmooyinka, helminthiasis, xanuunada mareenka caloosha iyo mindhicirka, atherosclerosis.
Isticmaalka qaanso ayaa ku caawin doona oogada oogada sanka. Si arrintan loo sameeyo, waxaad jarjartaa basasha yaryar, ku shub 200 ml oo ah biyo diiran oo la kariyey, ku dar qaado oo malab ah oo ka baxsan saacad meel gudcur ah. Saabbiir sanka 6 jeer maalintii.
Waxay saamayn ku yeelan doontaa xaaladda bukaanka. neefta oo uumi ku jirta saliid dhowr jeer maalintiiba 15 daqiiqo. Waxaa si fiican loo yaqaanaa in malab leh basasha ay jilcisaa xuubka xabka ee sanka, faa'iidooyinkeeda ee rhinitis waa mid aad u ballaaran.
Si aad tan u aragtid, waxaad isku dayi kartaa inaad iskudhafato kale. faleebo basasha: 2 tbsp. l basasha la jajabiyey ku shub 2 koob oo biyo nadiifa, ku adkeyso 2 saacadood iyo cadaadis. Ku dar faleebo 1, 5 koob oo malab ah iyo 2 tsp. saliid badda, si fiican u walaaq oo biyo raaci sanka iyo afka qoorta 3 jeer maalintii ilaa daaweyn dhamaystiran.
Iyada oo ciriiriga dhegta
Adiga oo maskaxda ku haya waxa ay fitamiinadu ku jiraan basasha, waxaad ku imaan kartaa gabagabada in, adoo isticmaalaya, waxaad runtii ka takhalusi kartaa cudurro badan, mid ka mid ah taas oo ah ciriiriga dhegta. Nidaamkan aan fiicneyn waxaa sababi kara dhowr arrimood: otitis, qufacayaasha sulfuric, qabow, iwm.
Waxay la wareegi kartaa dufcadda dhibcood oo basasha ah. Si aad u diyaargarowdid, waxaad u baahan tahay inaad tuujiso casiirka cusub ee basasha oo ku qoyso vodka marka loo eego 1: 4. Si aad u duugo dhagaha subaxda iyo fiidkii. Intaa waxaa dheer, waxaad samayn kartaa gray of basasha, ku duubaan dhogorta suuf iyo ku riday kanaalka dhegta. Si kastaba ha ahaatee, daroogooyinkaas looma isticmaali karo otomoosis.
Wax ku ool ah nooca dhaawacan waa basasha iyo sonkorta sonkorta. Qeybahan waxay yareeyaan xanuunka adoo iskala-bixinaya. Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad kudagtid faashad saliideed, ku dar basasha isku qasan sonkorta 1: 1, marka ugu dambeyntii ku cadaadi faashad adag. Beddel qalabkani kharashka laba jeer maalintii.
Iyadoo la jarayo iyo cillado
Daawo dhaqameed ayaa muddo dheer ogaa faa'iidooyinka basasha ee daaweynta furunculosis.
Basasha waxay soo saaraan malax ka soo duudduuban boodboodka waxayna xoojisaa koritaankooda.
Basasha ayaa la gooyaa qeyb ka mid ah guluubka oo ku dhegay digsi waxaana lagu hayaa kulayl yar 10 daqiiqo, ka dibna codsadey aagga ay dhibaatadu saameysey.
Waxaad dubi kartaa basasha foornada, ku rid on taarikada, ka saar filimka ka mid kasta oo ku rid on kasoobaxa. Isbeddelka saxanka waa inuu noqdaa sida soohaxa malaxda. Waxaa jira doorasho kale oo karinta ah: ka dib markii la dubayo, ku rid basasha si xaalad ah gruel, qaso saabuun.
Basasha waxay yareyneysaa dhibaatada oo leh cirrid. Karkari basasha caanaha ama dubi foornada, ka dibna si dhaqso ah ugu xir boogaha iyo faashadda. Sidoo kale basasha la dubay waa la isku qasan yahay saabuun la daadiyo, iyo massbalka soo baxa waxaa loo adeegsadaa bararka nadiifinta ee unugyada, oo beddelaya afartii saacadoodba.
Basasha ee daawada dhaqameed ayaa loo isticmaalaa si loo yareeyo dhibaatooyinka ba'an. Waxay ku dhiirrigelisaa yareynta cadaadiska isku dar ah basasha, malab iyo liin. Isku ururi hal galaas oo casiir ah basaas, ku dar hal galaas oo malab ah iyo 100 g oo ah jiliga la jarjaray, qaado saacad ka hor cuntooyinka saddex jeer maalintii saddex bilood. Isku darka ayaa caadi ah nidaamka wadnaha iyo xididdada, xoojinta nidaamka difaaca jirka.
Casiir basbaas oo cusub oo leh hargab
Juice cusub ayaa ka qayb qaadan doona soo kabashada hargabka. Shabaggiisa 50 g basasha, ku dar 2 tbsp. l oo khal, isku walaaq oo ku tuujin iyada oo cheesecloth. Si isku dar ah ku dar 2 tbsp. l malab Codso 1 tsp. 30 daqiiqo kasta. Basasha ayaa aad u faa'iido leh si loo xoojiyo nidaamka difaaca jidhka, ka ilaalinta jidhka cudurada kala duwan dibadda.
Tincture ee basasha ee boronkiitka
Tincture basasha - Waa faa'iido fiican ee boronkiitada. Diyaarinta tincture waa sahlan: ku rid basal jar jartey oo ku rid weel quraarad ah, ku dabool sonkorta oo ka bax saddex saacadood heerkulka qolka. Qaado daawada saddex jeer maalintii iyo 1 tbsp. l
Casiirka basasha waxaa badanaa loo qaataa boronkiitka, faa'iidooyinkeeda waa mid la taaban karo oo la caddeeyey tusaalayaal dad badan oo sheekadooda ku saabsan bogga internetka ku jira ee kala duwan. Waxaa jira sidaas doorashada tincture: in 1 l oo biyo ah kala gooyo galaas sonkor ah, geli dabka, keenso joogtada sharoobada iyo ku dar 2 basasha leh basbaaska. Karkari tincture ilaa basasha waa 2 jeer ka yar. Isticmaal cabitaanka la helo 2 jeer maalintii kahor cuntooyinka loogu talagalay ½ koob.
Faleebo ee basasha laga soo diro Gooryaanka
Si looga takhaluso Gooryaanka, daawada dhaqameed waxay bixisaa macaanka soo socda: 2 basal oo yaryar oo jar jartey oo ku shub 500 ml oo biyo ah karkaraya, ku adkeyso 12 saacadood iyo cab cabitaanka soo-saarka ee basasha 30 daqiiqo cuntada ka hor, 3 tbsp. l saddex jeer maalintii. Noocan tincture ah waa mid ku habboon. carruurta.
Dadka waaweyn isku dayi karaan kala duwanaanshahan: 100 g oo ah basasha la jarjarey ku shub vodka dhalada 1.5 l oo ku adkeyso 10 maalmood. Cab 1 tbsp. l saac ka hor cuntada.
Basal-buluuga wuxuu ka caawiyaa inuu daaweeyo beerka: wuxuu hagaajiyaa hawshiisa oo waa ficil-celin ku saabsan cirrhosis
Sidee loo isticmaalaa basasha kookhoolojiyada
Beautiorka ayaa muddo dheer ogaaday fara badan oo fitamiinnada iyo macdanta khudraddan ka dibna isticmaalaan basasha quruxda timaha iyo maqaarka.
Basasha macnaheedu waa sidii loola dagaalami lahaa xannibaadda loo isticmaalo maalmaha hore. Maaskada baska Waxay leedahay saameyn faa'iido leh on maqaarka, iyada oo ku daraya xubno raad iyo fitamiino. 2 tbsp. l la jarjarey oo la jarjaray basbaaska hilibka hilibka 1 koob. khamriga, xoqin maqaarka, ku dabool foornada isla markaana ku duub shukumaan dusha sare ilaa 1 saac, ka dibna biyo raaci biyo diirran oo ku dhaq biyo shaambo si aad uga saarto harta.
Waxaad soo bandhigi kartaa weel kale oo maaskaro ah: 2 tbsp. l casiir basasha cusub isku qasan 1 tbsp. l casiir qajaar ah, ku dar 1 suuf, 1 tbsp. l cognac. Si isku mid ah isku dar 2 tbsp. l saliid burcad ah iyo 3 dhibcood oo saliid baraf ah, isku darka labada isku darka, isku dar, ku riix maqaarka, madaxa ku duub bac si 20 daqiiqo ah.
Xalliyaan dhibaatada hareeraha ayaa kaa caawin doonta diirka basasha. Shub 50 g oo kabo ah 1 litir biyo karkaraya oo ka baxsan 40 daqiiqo. Timaha raaci faleebadan ka dib mar kasta oo dhaq.
Ma taqaanaa? Blondes laguma talinayo in la isticmaalo badeecadaan sababtoo ah khatarta ah inay timo dharkooda.
Qulqulka qalalan ayaa baabi'i doona codsiyada kaddib maaskaro castor: 1 tbsp. l basasha oo isku qasan 2 tbsp. l saliidka castor iyo ku dar 2 tbsp. l vodka, oo lagu riixay maqaarka 40 daqiiqo ka hor inta aanad maydhin.
Xoqan casiirka basasha cusub leh malab iyo cologne ee maqaarka ka hor intaadan maydhin - Hab wax ku ool ah oo lagu xoojinayo qaabka timaha. Isku darkaani waa la sifeeyey, daboolay filim iyo shukumaan, qabsadeen saddex saacadood oo maydhay. Qalabka wuxuu ka dhigayaa timo badan oo xoog leh.
Marka xigta maaskaro wuxuu hagaajiyaa koritaanka timaha wuxuuna ka caawiyaa ka hortagga timaha: 4 qaybood oo ka mid ah casiir basasha oo adag ayaa lagu qasi karaa 6 qaybood oo rooti rooti ah iyo 1 qaybood oo caano ah, 2 saacadood ka hor intaan lagu maydhin madaxa, madaxa oo kuleylka lagu maydho, oo lagu maydho jeermis.
Foosto basasha waxay xoojisaa timaha iyo faa'iidooyinkeeda ee xididdada waa weyn: waxay xirtaa qaabkeeda, waxay dhalinaysaa iftiin iyo dhalaalaya.
Qoyaan caano qallalan oo engegan maaskarada basasha iyo basasha. Boorash oo culus oo laga soo bilaabo ½ koob of oatmeal, ku dar casiir basasha casiir iyo 5 g oo malab ah. Iska ilaali wejiga ilaa inta qalalan. Miiskani wuxuu leeyahay saameyn tonic ah, wuxuu maqaarka ka soo baxaa maqaarka.
Cuntada soo socota waxay u baahan tahay gabdhaha la silciyo laga bilaabo finan iyo maqaar madow oo xad dhaaf ah. Iska yaree basal dhexdhexaad ah, tuujin juuska laga soo bilaabo gruel-ka dhalatay, isku mar ka jar iyo tuujin casiir karo karooto. Isku qas 50 ml oo casiir ah, ku dar 1 soodhaha iyo 20 ml saliid saytuun ah ama saliida qumbaha. Masajir wejiga, si tartiib ah u riix oo u bixi 20 daqiiqo. Kadib markaad isticmaashid maaskaro ma dareemaysid dareen xoog ah, dhuumo dhuuban iyo shaqada qanjidhada xayawaanka caadiga ah waa caadi.
Si loo ilaaliyo maqaarka caadiga ah iyo kuwa isku dhafanba dhibaatooyinka halista ah ee deegaanka maaskarada basasha iyo khamiirka. 1 tbsp. l qalalan khamiir ah oo lagu qasi jiray 1 tbsp. l caano, ku dar juice of 1 casiir basal yar, qaso iyo codsan wajiga ilaa 15 daqiiqo.
Macaamiil badan oo lafdhabarta ah ayaa jeclaan lahaa in ay ka takhalusaan muuqaalkan ciladda. Caawin doonaa marka ay iftiimiso iftiinka Maaskeelkan: Isku qas 5 ml oo fitamiin C ku jirta ampoules leh 50 ml oo casiir ah basbaas, 25 ml oo khudradda cider ah iyo 75 ml oo saliid saytuun ah, ku dar 10 g oo malab ah, tufaax kala jajaban iyo 1 suufi, oo si fiican isku qasaan kuna garaaca dhamaan waxyaabaha maaddada. Codso emulsion soo-saarka leh lakab qaro gaar ah oo ku saabsan meelaha leh lowska. Ka dib 15 daqiiqo ka dib iska dhaq maaskarada biyaha macdanta heerkulka qolka.
Waxay kordhisaa wareegga dhiigga wuxuuna unugyada maqaarku shaqaynayaa 100% maaskarada basasha iyo saliida lanolin. 1 basal oo waaweyn waa in lagu daraa 5 ml oo saliid ah lanolin iyo 2 tbsp. l malab, ka dhig isku dar ah wajiga 30 daqiiqo, ka dibna saar jarjir qoyan. Maskaxaha basasha waa in la sameeyaa 3 bilood gudahood 2 jeer toddobaadkii.
Sida loo kaydiyo basasha
Xilliga kaydinta muddada dheer, waa inaad doorataa basasha ballaaran oo caafimaad leh, taas oo aan wax khasaare ah lahayn ... Caanaha yaryar oo aan la bislayn waa in la dhigo oo la wada baabbe'aa marka hore. Basasha ku kaydi meel qallalan, meel gudcur leh oo ku jirta weel hawo leh, oo la doorbidayo qashin khaas ah oo ku yaalla boorsad ama xarig.
Sida weelka, waxaad isticmaali kartaa dambiilo khafiif ah oo u oggolaanaya in hawadu ka gudubto, sanduuqyada alwaaxda ah ama bacaha balaastikada ah oo gacan ka geysta badbaadinta booska, sanduuqyada kartoonada leh godadka dhinacyada iyo hoose ee hawo qaadashada basasha, warqadaha ama bacaha dhejiska ah ama shabakadaha polypropylene ee u oggolaanaya wareegga hawada.
Ku shub basasha jilicsan ama diirka basasha - tani waxay ka ilaalinaysaa biqilka iyo dhecaan kale, niyadjabku wuxuu nuugi doonaa qoyaan dheeraad ah. Waa inaad si joogto ah u baartaa oo aad kala soocdid basasha la keydiyo, ka saarista basasha infekshanka, iyo sidoo kale inaad hubiso in khudradda ay qoyaan tahay. Basasha sampler waa in la qalajiyaa dabaqa ama foornada.
Contraindications iyo saameynta daawada ee basasha
Shaki la'aan, waxaa jira faa'iido weyn oo laga helo basasha, laakiin khudradda cajiibka ahi waxay sidoo kale keeni kartaa waxyeello. Basasha ayaa ka xanaajin kara xubnaha dheef-shiid kiimikaadka oo kordhiya aaladaha caloosha, sidaas darteed ka hortaga cudurada beerka iyo kelyaha, boogta gastric, gastritis leh acidity sare.
Basasha sidoo kale waxay saameyn taban ku yeelan kartaa shaqada habka wadnaha iyo xididada: Waxay keentaa xanaaq ka yimaada habdhiska dareemayaasha, taasoo ka dhigeysa hoos u dhaca cadaadiska dhiigga.Waxay sidoo kale halis u tahay asmada - waxay keeni kartaa qabasho.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inta aad cuni kartid basasha adiga oo aan cabsaneyn caafimaadkaaga - 1-1.5 nalalka maalintii, 3 jeer toddobaadkii.
Basasha ma aha oo keliya kobcinta dhadhanka cuntooyinka kala duwan, laakiin sidoo kale si firfircoon ayaa loo isticmaalaa daawada iyo qurxinta.